MTP MPO Fibre, MTP Fibre Optic Patch Cord, Fibre Optic Pigtails - RAISE
Fantaro ny vokatray mafana
MTO to 6x LC Duplex 12 Fibre Multimode OM3/OM4 Breakout Fibre Optic Patch Cord
Momba ny filazalazana ny orinasa
Ny gazetintsika, ny vaovao farany momba ny vokatray, ny vaovao ary ny tolotra manokana.
Ny fanoloran-tenantsika dia miankina amin'ny lafiny rehetra amin'ny dingana, loharano ary fomba ahafahantsika manangana tambajotra ambony ho an'ny mpanjifantsika. Amin'ny alàlan'ny politika momba ny kalitao mifantoka amin'ny fanatsarana hatrany ny vokatra sy ny serivisy, dia afaka mahatratra ny fahafaham-po ambony indrindra ho an'ny mpanjifa izahay.
Programa fitsapana vahaolana
Ny vokatra mifanaraka amin'ny kilasy eran-tany an'i Raisefiber dia voasedra 100%, mifanaraka amin'ny mpivarotra 200 mahery. Fitsapana ho an'ny fahombiazany ao amin'ny trano laboratoara manerantany miaraka amin'ny fitaovana tambajotra farany mba hahazoana antoka ny fahamendrehana.
Niorina tamin'ny 2008, Raisefiber dia orinasa teknolojia avo lenta eran-tany izay manome vahaolana sy serivisy amin'ny tambajotram-pifandraisana haingana amin'ny indostria maro. Raisefiber dia manolotra karazana fifandraisan-davitra manara-penitra ary afaka manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay ihany koa.
Ny fahatakarana ny sehatra fampiharana ny vokatra dia hanampy anao hamaha ny olana tsara kokoa
MTP SM Fibre Optic Patch Cord
MTP MM Fibre Optic Patch Cord
Fantaro ny fihetsehan'ny orinasa sy ny indostria
Ny fangatahana lehibe amin'ny fampitomboana ny bandwidth dia nahatonga ny famoahana ny fenitra 802.3z (IEEE) ho an'ny Gigabit Ethernet amin'ny fibre optika. Araka ny fantatsika rehetra, 1000BASE-LX transceiver modules dia tsy afaka miasa afa-tsy amin'ny fibre tokana. Na izany aza, mety hiteraka olana izany raha mampiasa fibre multimode ny tambajotra fibre efa misy. Rehefa atomboka amin'ny fibre multimode ny fibre maody tokana dia hiseho ny tranga iray antsoina hoe Differential Mode Delay (DMD).
Inona no maha samy hafa ny UPC sy ny APC...
Matetika isika no mandre momba ny famaritana toy ny "LC / UPC multimode duplex fibre optic patch tariby", na "ST / APC single-mode simplex fibre optic jumper". Inona no atao hoe UPC sy ...
Fibre maody tokana (SMF): Fahaizana ambony kokoa sy ...
Araka ny fantatsika rehetra, ny fibre multimode dia matetika mizara ho OM1, OM2, OM3 ary OM4. Dia ahoana ny fibre mode single? Raha ny marina, ny karazana fibre fomba tokana dia toa sarotra kokoa noho ny fibre multimode....